घरज्वाँई बसेका यी पुरुषको दु'श्कर्मले सबैको होस उडायो
काठमाडौं । घरज्वाँई बसेका एक पुरुषले गरेको भयानक व्यवहारले सबैको होस उडाएको छ । भारत, राजस्थान राज्यको शिवदासपुरा क्षेत्रमा आइतबार राति करिब १ बजे एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमती र सासुलाई यो सं’सारबाट वि’दा गर्दिएका छन् ।
यसपछि, बिहान ३ः३० बजेतिर ति पुरुष तीन बच्चाहरु मोटरसाइकलमा राखेर चाक्सु प्रहरी चौकी पुगे । र’ग’तले भि’जे’को लु’गा लगाएको ३९ वर्षीय रामकिशन सैनीले प्रहरीसँग आफ्नी पत्नी र सासूको जी’वन लि’एको कुरा प्रहरीलाई बताए । उनले प्रहरीलाई घटनास्थल पुगेर देख्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि बताएका थिए ।
यसरी कोही मान्छे आफ्नो गल्ती मानेर आएको देखेर प्रहरी पनि चकित पर्यो । उनले प्रहरीलाई शिवदासपुरामा घटनास्थलमा लगेर गए । त्यहाँको कोठामा दुबै महिलाको ला’श देखेर प्रहरीहरू नै आ’त्तिए । कोठा भर र’गत फै’लिएको थियो ।
यसपछि चाक्सु थानेका उपनिरीक्षक शम्भु सिंहले घटनाको बारेमा शिवदासपुरा थाना प्रभारी इन्द्रज मारोडियालाई जानकारी गराए । शिवदासपुरा प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर ति व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर गयो ।
सोमबार बिहान डिसीपी मनोजकुमार चौधरी, अतिरिक्त डीसीपी अवनीश कुमार शर्मा पनि घटनास्थल पुगेका थिए । घटनास्थलमा एफएसएल टीमलाई बोलाएर प्रमाण संकलन गरिएको हो ।
शिवदासपुरा प्रहरीले बताए अनुसार रामकिशन उसको ससुरालीमा कामदारको रूपमा बस्ने गर्थे । माइतीमा उनी ३५ वर्षीया श्रीमती मञ्जु, ६० वर्षीया सासु गौरा देवी र तीन बच्चाहरु सँगै बस्दै आएका थिए ।
रामकिशनले आफ्नी श्रीमतीको च’रि’त्रमाथि शं’का गर्थे । अरु के’टाहरुसँग ला’गेको भन्दै वि’वाद हुने गर्थ्यो । कोरोना महामारीमा रामकिशनको रोजगारी पनि बन्द भयो । यस कारण, उनी प्रायः घरमा बस्न थालेका थिए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रामकिशनलाई सासुले पनि स्वास्नीको पक्ष लिएकोजस्तो लाग्थ्यो । त्यसकारण उनले सासु र श्रीमती दुईजनालाई नै भगवानको प्यारो बनाउने निर्णय गरेका हुन् । आइतवार रात, रामकिशनकी श्रीमती र सासू सुतेका थिए । त्यो समयमा नै उनले दुई जनाको जी’वन लिएका हुन् ।
यस पछि तीन बच्चाहरू लिएर बाइकमा बसे अनी चाक्सु प्रहरी चौकीमा पुगे । प्रहरीका अनुसार रामकिशनका दुई छोरा पहिलो १५ वर्षीय र अर्को १३ वर्षका छन् । यस्तै ११ वर्षीया एक छोरी पनि छिन् । बच्चाहरुलाई परिवारसहित घर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुई जनाको जी’वन लि’एपछि पनि रामकिशनको अनुहारमा कुनै निराशा थिएन । उनी चाक्सु प्रहरी चौकीमा पुगेर आफुलाई ससुरालीहरुको घर नम्बर याद नभएको बताएका थिए । तर उनी प्रहरीलाई आफैं घटनास्थलसम्म लैजान भने सक्षम भएको बताउँथे । त्यसपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो । ला’शहरूको निरीक्षण गरेपछि ती ला’शहरू महात्मा गान्धी अस्पतालमा राखिएको छ ।
जहाँ ला’शहरुको परीक्षण गरीनेछ । दुई जनाको ज्या’न लि’एको खबरले उक्त कोलोनीमा स’नसनी फैलिएको थियो । शिवदासपुरा प्रहरीले रामकिशनको विरुद्ध ३०२ आईपीसी अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अचानक माहुरीको झुण्ड विमानमा बसेपछि जे भयो !
कु’मारीप’न परीक्षण र मर्मत गराउँनेको संख्या थाहाँ पाउँदा चकित, कु’मारीप’न मर्मत सत्य हो की भ्रम ?
सामूहिक धार्मिक भोजपछि सबैले र’गत बा’न्ता ग’र्न थाले, देउता रिसाएको भन्दा-भन्दै गाउँनै सिकिस्त